Xianglong Taleefoonka Dadweynaha ayaa lagu rakibay Madaarka Caalamiga ah ee Miami-News-Yuyao Xianglong Isgaarsiinta Warshadaha Co., Ltd.
Xianglong Handset Telephone Dadweynaha oo Lagu rakibay Madaarka Caalamiga ah ee Miami
Waqtiga: 2020-10-07 Hits: 42
Way sii adkaaneysaa in taleefan lacag lagu helo laga helo garoonka diyaaradaha madaama isticmaalka taleefannada gacanta uu noqdo mid meel walba yaal, garoomada diyaaradahana ay ka takhalusaan tikniyoolajiyaddii iyo adeegyadii hore si ay ula qabsadaan baahiyaha isbaddelaya ee dadka safarka ah.
Si kastaba ha noqotee, garoomada diyaaradaha qaarkood, sida garoonka diyaaradaha caalamiga ee Austin-Bergstrom iyo garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Miami, Soo bandhig ku habboon taleefannada maxalliga ah ee loogu talagalay dadka safarka ah ee sameeyan't leeyihiin taleefannada gacanta.
Xianglong waa shirkad soo saare iyo soo-saare qaybaha taleefannada warshadaha, waxaan ku dhammaynay mashruuc guul-guul ah garoonka diyaaradaha caalamiga ee Miami. Xianglong taleefanka dadweynaha A01 waa mid ka mid ah wax soo saarka ugu iibka badan, wuxuu qeyb ku leeyahay isgaarsiinta iyo dhismaha garoonka diyaaradaha.
Waxay iibsadeen taxane ah A01 Gacan-siinta Taleefoonka Gacanta Taleefoonka U Adag ee Vandal, jillaab ku wareejinta, iyo zinc keypad. Qiimaynta biyuhu ee taleefanka gacanta ayaa kor u kacay ilaa IP65. Waxay ku habboon tahay gobollada leh qoyaan badan iyo cimilo qalafsan. Intaas waxaa sii dheer, taleefanka gacanta waxaa laga sameeyaa walxaha ABS sidoo kale qaataha wuxuu ku qalabeysan yahay aaladda maqalka iyo makarafoonka yareynta dhawaaqa. Isla mar ahaantaana, rada biraha oo buuxa waxay xoojinayaan saameynta biyaha iyo uumiga ee taleefanka.
Xianglong waxay siisaa noocyo kala duwan oo qalab taleefan oo gaar ah iyo adeegyo u gaar ah macaamiisha. Iyadoo 14 sano 'horumar ah, waxaan u habeyn karnaa taleefannada gacanta ee kala duwan, keypads-ka iyo mashiinnada macaamiisha si deg deg ah. Qaadashada inay bixiso keypads-yada warshadaha iyo milatariga iyo taleefannada gacanta is Hadafkeena shirkadeena, waxaan diirada saareynaa inaan noqono hogaamiyaha caalamiga ah ee keydka warshadaha iyo taleefannada gacanta ee isgaarsiinta!
Hore: Naqshadeynta Goobta iyo Shuruudaha Telefoonka Dabka-lagula dagaallamayo
Xiga: Kiiboodhka Warshadaha IP65 Kiosk Birta leh Trackball ee Loo Adeegsaday Kiisaska Dadweynaha